गर्मीमा शीतल गर्ने कपडाहरू - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
गर्मीमा शीतल गर्ने कपडाहरू
गर्मी सिजनमा पहिरनको सही छनौट गर्न सकिएन भने लगाउँदा असहज हुनुका साथै छालामा समेत समस्याहरू देखा पर्छ । गर्मी मौसममा लुगाहरू लगाउँदा बाहिरी तापबाट शीतल गर्ने कपडाहरू छनौट गर्नुपर्छ ।
गर्मी सिजनमा कस्तो कपडा छनौट गर्ने ? कुन कपडा यो सिजनका लागि राम्रो हुन्छ ? जस्ता विषयमा सबैको चासो रहने गरेको छ ।
रेसमको कपडा सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यो कपडा भव्यता र लगाउँदा आरामदायी हुने हुनाले राम्रो मानिन्छ । इतिहासमा रेसमका कपडाहरू राजा–महाराजाले प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
चम्ब्रे पातलो र हल्का प्रकारको कपडा हो । चब्रेले ट्राउजर, ज्याकेट, टप्स र सर्टहरू हुने गर्छ । गर्मीमा डेनिम प्रेमीहरूका लागि चब्रे अर्को विकल्प हुन सक्छ । यसबाट बनेको ट्राउजर गर्मीमा प्रयोग गर्न एकदमै उपयोगी र सहज हुन्छ ।
सुती र रेसमको कपडाबाट तयार पारिन्छ, खादी । यो सांस्कृतिक पोसाकको रूपमा लोकप्रिय छ । खादीको कपडा गर्मीको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ । यो कपडाले शरीरबाट निस्किएको पसिना सोस्छ, यसकारण यो कपडा गर्मीमा लगाउँदा राम्रो मानिन्छ ।
रेसमको कपडा सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यो कपडा भव्यता र लगाउँदा आरामदायी हुने हुनाले राम्रो मानिन्छ । इतिहासमा रेसमका कपडाहरू राजा–महाराजाले प्रयोग गरेको पाइन्छ । गर्मीको समयमा रेसमको कपडाले शीतल प्रदान गर्दछ ।